Izany no fomba fiasan'ny WhatsApp Business, izay efa nanomboka ny fitsapana voalohany tany Espana | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia manohy miasa am-pahavitrihana amin'ny hoaviny, ary ankoatry ny vaovao sy ireo fiasa vaovao navoakany tsindraindray, dia toa tsy voamarina fa Nanomboka niasa tao amin'ny WhatsApp Business izy ireo ary nanomboka nanao izany koa teto amin'ny firenentsika. Ity kinova vaovao an'ny fampiharana ity dia natao ho an'ireo orinasa izay afaka manana fifandraisana akaiky amin'ireo mpanjifany.
Fivoahana marobe, avy amin'ny orinasa sasany izay manandrana ny WhatsApp Business, no namela anay hahafantatra lafin-javatra sasany amin'ilay fampiharana vaovao ary koa antsipiriany momba ny fomba fiasan'izany. Mazava ho azy, mbola tsy fantatsika ny vidin'ny WhatsApp ho an'ny orinasa lehibe.
1 Inona no ho hitantsika amin'ny mpampiasa WhatsApp Business?
2 Ary inona no azon'ny orinasa atao?
Inona no ho hitantsika amin'ny mpampiasa WhatsApp Business?
Ny iray amin'ireo olana lehibe ateraky ny mpampiasa WhatsApp marobe dia ny hahitantsika ny tenantsika rehefa miditra amin'ny iray amin'ireo mombamomba ireo, ary koa inona no fahafahanao mifandray aminay. Mikasika ny faharoa, tsy dia be loatra ny fampahalalana amin'izao fotoana izao, noho izany mila miorim-paka isika amin'ny fahitana zavatra vitsivitsy momba ilay voalohany.
Miankina amin'ny orinasa dia hanana fampiasa hafa isika na hafa. Hampiasa azy ny orinasa sasany araka ny ahitanao ny horonan-tsary asehonay anao eto ambany, na toy ny fantsom-panompoana mpanjifa hanazavana ny fisalasalan'ny mpampiasa na hamaly ny fangatahana samihafa, zavatra izay efa vita matetika ataon'ny orinasa sasany.
Ny hita fa mazava dia tsy hisy karazana kaonty WhatsApp Business iray, fa mety hahatratra efatra;
Kaonty orinasa: ho kaonty mahazatra io izay hifindra amin'ny mombamomba ny orinasa
Kaonty orinasa voamarina: kaonty mifindra monina mankany amin'ny piraofilin'ny orinasa izy io, izay hamarinina ary afaka mampiasa ny rindranasa finday ho an'ny orinasa
Kaonty orinasa misy badge fisotroan-dronono: dia ireo kaonty izay voamarina indray andro any, fa noho ny fanararaotana na fandefasana spam, dia natsahatra tsy voamarina. Izahay dia mieritreritra fa tsy misy orinasa amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao maniry hanana izany karazana kaonty izany
Kaonty amin'ny kaonty mahazatra: raha te hijanona tsy hanana kaonty orinasa ny orinasa dia hanana kaonty amin'ity karazana ity
Ary inona no azon'ny orinasa atao?
Voalohany indrindra, tsy maintsy fantarintsika fa ny orinasa dia hanana fampiharana manokana, izay farafaharatsiny mba ho an'ny fitaovana misy ny rafitra fiasa Android ihany farafaharatsiny. Azonao atao ny mahita ny sasantsasany amin'ireo safidy izay hananan'ny orinasa amin'ny sary asehonay anao eto ambany;
Ary koa ny sasany amin'ireo endri-javatra manokana an'ny WhatsApp Business dia ho ireto manaraka ireto;
Azo atao ny mandefa hafatra ho azy, afaka mametraka ora fanokafana aza
Fizarana "Statistika" izay ahitanao ireo hafatra nalefa sy voarainao
Ny fanohanana ny takelaka izay araka ny fantatsika rehetra dia tsy misy amin'ny kinova mahazatra ankehitriny
Mety ny kaonty miaraka na tsy miankina na orinasa, na mifindra maharitra kaonty manokana amin'ny orinasa
Tsy ho utopia ho an'ny orinasan-tserasera WhatsApp intsony ny fampidirana isa laharana amin'ny WhatsApp
Amin'izao fotoana izao tsy misy daty ofisialy ho an'ny premiere an'ny WhatsApp Business, na dia ny mazava aza dia ny filan'ny Facebook, tompon'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo, dia toa mitodika hatrany amin'ny tontolon'ny asa. Ary ny WhatsApp ho an'ny olona tsirairay dia azontsika lazaina fa efa voahidy hatramin'ny fetrany ary ny faran'ny fihetsika ary indrindra ny tombony dia nahena tokoa.
Mihevitra ve ianao fa hahomby ny fampiharana WhatsApp Business vaovao na eo amin'ny tontolon'ny orinasa na eo amin'ny isam-batan'olona?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay, ary dodona hahafantatra ny hevitrao sy ny ahiahyo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Izany no fomba fiasan'ny WhatsApp Business, izay efa nanomboka ny fitsapana voalohany nataony tany Espana
Finday avo lenta CAT S31 sy S41 vaovao, finday henjana indrindra ho an'ireo mpampiasa mitaky